कुवामा खसेको सिंहलाई यसरि बाहिर निकालियो…भिडियोमा हेर्नुहोस - Daily Lokmandu
Homeसमाचारकुवामा खसेको सिंहलाई यसरि बाहिर निकालियो…भिडियोमा हेर्नुहोस
July 31, 2018 समाचार Comments Off on कुवामा खसेको सिंहलाई यसरि बाहिर निकालियो…भिडियोमा हेर्नुहोस
नोट : भिडियो अन्त्यमा छ ………
एजेन्सी : साली भिनाजुको नातालाई सधैं मजाकको विषय बनाइन्छ । यी दुईले एक अर्कालाई जिस्क्याइरहन्छन् भन्ने मान्यता हाम्रो समाजमा छ । तर, एक भिनाजुले भने सालीको प्रेममा यस्तोसम्म गरेका छन् जुन अरुले सोच्न पनि सक्दैनन् । भारतको उत्तर प्रदेश बुलंदशहरका ती व्यक्तिले ससुराली पुगेर बबाल मच्चाइदिएका छन् ।
रक्सीको तालमा शिक्षिकाले आफ्नै विद्यार्थीसँग बनाइन यौन सम्बन्ध
एजेन्सी। लण्डनमा एक २८ वर्षकी शिक्षिकालाई आफ्नै विद्यार्थीसँग शारीरिक सम्बन्ध बनाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । शिक्षकका ३३ वर्षका पतिमाथि पनि किशोरलाई रक्सी पिलाएको आरोप छ । यो मुद्दामा महिला शिक्षिकालाई ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ । अदालतले महिला शिक्षिकाको पृष्ठभूमि रिपोर्ट मागेको छ ।
महिला शिक्षिका जेसिकाले प्रहरीसामु आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै आफूले १८ वर्षका एक किशोरसँग शारीरिक सम्बन्ध बनाएको स्वीकार गरेकी छिन् । जेसिकाका पति डेरिकले पनि ती किशोरसँग रक्सी पिएको स्वीकार गरेका छन् । जेसिकाले त्यतिबेला आफू नशामा भएको बताएकी छिन् ।
विद्यार्थीलाई रक्सी पिलाएको अपराधमा जेसिकाका पतिलाई ६ महिनाको जेल सजाय हुन सक्छ । जेसिकाका अनुसार उनले आफ्ना एक विद्यार्थीलाई आफ्ना पनि घरमै हुँदा बोलाएकी थिइन् । राती उनीहरुले रक्सी पिए र बिहान उनले विद्यार्थीसँग यौन सम्बनध बनाएकी थिइन् ।
नागको अन्डा देख्ने मान्छे भाग्यमानी हुन्छ रे ! तपाई पनि यो भिडियो हेर्नुस अनि शेयर गर्नुस !! (1,244)
यो भिडियो हेरेपछि कसको आखामा आसु आउदैन होला (भिडियो सहित) (1,195)
पोखराका इञ्जिनियर सन्दीप गुरुङ विश्वमै प्रथम ! सम्मान स्वरूप लाइक, कमेन्ट र सेयर गरौं (1,119)
बुधबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ माघ २ गते बुधबारको… (1,074)
‘नेपालमै खनिखोस्री गरी खाउ, मलेसिया नआउ’…सक्दो शेयर गरौ (966)
२०७६ को पात्रो माघ १५ गतेभित्र बजारमा आउदै, बिदा बारे यस्तो छ निर्णय (600)
३३ काेटी देउताकाे दर्शन गरेर भेटी स्वरुप एक एक शेयर गर्दै बि.सं. २०७५ माघ महिनाको [मासिक… (567)
माघे संक्राती कै दिन भयानक दुर्घटना एक सशस्त्र प्रहरी सहित घटनास्थल मै ३ जनाको मृत्यु #RIP (537)
अब त तिमिलाई भेट्न पनि, अरु कसैको अनुमती चाहिन्छ मलाई…सबैले एकपटक… (9,818)